သခင် ကို မြွေဟောက် ရန်ကနေ အသေခံပြီး ကာကွယ်ပေးခဲ့တဲ့ သစ္စာရှိခွေးကလေး ဖိုးလုံး – ရှအေလငျး
သခင် ကို မြွေဟောက် ရန်ကနေ အသေခံပြီး ကာကွယ်ပေးခဲ့တဲ့ သစ္စာရှိခွေးကလေး ဖိုးလုံး
ခွေးဆိုတာ အင်မတန်သစ္စာရှိသော သတ္တဝါပါ….. လူတွေနဲ့ အနီးကပ်ဆုံးသော သတ္တဝါဖြစ်ပြီး လူ့အရိပ်အကဲကို နားလည်ပြီး သင်ပေးရင် တတ်ကျွမ်းလွယ်တဲ့ သတ္တဝါထဲမှာ ခွေးလည်းပါဝင်ပါတယ်…သခင်အပေါ်ကိုလည်း အသက်ပေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်တတ်ကြသလို သခင့်ကိုလည်း အင်မတန်သစ္စာရှိကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်…. ခွေးကနေ သခင်ကို ကယ်လိုက်တာ…သခင်သေဆုံးသွားတာမသိဘဲ သခင့်ပြန်အလာကိုစောင့်နေတာ..စသဖြင့် အကြောင်းအရာမျိုးစုံဟာ ပြင်ပကမ္ဘာမှာ တကယ်ရှိသလို အဲဒီဖြစ်ရပ်မှန်အဖြစ်အပျက်တွေကိုလည်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေနဲ့ ရိုက်ကူးဖော်ပြရင်း ခွေးတွေရဲ့ သစ္စာရှိပုံကို ဖော်ညွှန်းထားတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေလည်း မနည်းပါဘူး..
ဒီအထဲမှာဆို သေဆုံးသွားတဲ့သခင်ရဲ့ အိမ်အပြန်ကို စောင့်နေရှာတဲ့ Hachiko ဆိုတဲ့ ခွေးလေးအကြောင်းကို ရိုက်ထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် ဂျပန်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဆိုရင် ကြည့်ရှုသူအပေါင်းကို မျက်ရည်ကျစေတဲ့အထိ ဖြစ်စေခဲ့တာပါ… ခွေးလေးရဲ့ သစ္စာရှိမှုကြောင့် အဲဒီခွေးလေးသေသွားတော့ သူ့သခင်ကို အမြဲလာစောင့်နေတဲ့ နေရာလေးမှာ ရုပ်တုထုပြီး ဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်….
အခုဖော်ပြမဲ့ အဖြစ်အပျက်ကတော့ နိုင်ငံခြားမှာ မဟုတ်ဘဲ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ခွေးလေးတစ်ကောင်ကနေ လူသားတစ်ဦးရဲ့ အသက်ကို ကယ်တင်လိုက်တဲ့ ဖြစ်ရပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်…ဒီဖြစ်ရပ်မှန်အကြောင်းအရာလေးကို ကို Kyaw Zawe Win ရဲ့ Facebook အကောင့်ကနေ မျှဝေထားတာဖြစ်ပြီး မြွေဟောက်တစ်ကောင်ရဲ့ အန္တရာယ်ကနေ ကယ်တင်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်အလေးကို ခုလိုပဲ ပြောပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်….
ကျွန်တော်ရယ် ဖိုးလုံးရယ် မြွေဟောက်ရယ်
ဒီည မှတ်မှတ်ရရ ..ည ၁၁ နာရီလောက်ဖိုးလုံး ကျွန်တော့်အခန်းအပေါက်ဝကနေ စူးစူးဝါးဝါး ဟောင်နေတယ်။ စိတ်ထဲတော့ တခုခုပဲ လို့ထင်လို့ အခန်းအပြင်ဘက်ထွက်ပီး ခြံထဲကိုလှမ်းကြည့်နေတာ ကျိန်းသေတယ် ခြံအပြင်မှာ လူစိမ်းရှိရမယ်။ ဖိုးလုံးဟောင်တာ လုံးဝမရပ်သွားဘူး အပြင်ဘက်လည်း မထွက်ဘူး ..
သံမံတလင်းကြည့်ဟောင်နေတာ စိတ်ထဲ မသင်္ကာလို့ အောက် ငုံ့ကြည့်တော့ ဖိုးလုံး ဟောင်လို့ ဟိုကောင်ပြေးတာ ခြေထောက်ကြားထဲဖြတ်အပြေး.. ဖိုးလုံးက အတင်းထိုးလိုက်နဲ့..ဟိုကောင်ဖိုးလုံးကိုကြောက်ပီး ကို့မမြင်တာ ကံကောင်းသွားတယ်..
အခုတော့ ဖိုးလုံးလည်း သူ့နေရာ သူသွားမအိပ်ပဲ အခန်းရှေ့ တခါးပေါက်တည့်တည့်ကနေ ဘယ့်မှ မသွားတော့ဘူး။ သူ့ အိပ်ရာ သွားအိပ်ခိုင်းလည်းမရတော့ဘူး ကျွန်တော့အခန်းရှေ့အပေါက်ဝကနေ တဖဝါးမှ မခွာတော့ဘူး..ဖိုးလုံး ကြည့်ပီး မျက်ရည်တောင် ဝဲမိတယ်။ ကျွန်တော်အပြင်က ပြန်လာရင် သူ့ကို ဝယ်ကျွေးရင် ၅၀၀ ရာတန် ပေါင်မုန့်လောက်ပဲ ကျွေးတာပါ။ သူသိတတ်တာကတော့..
ဖိုးလုံးရေ နောင်ဘဝတော့ ရှိရင် ခွေးလည်း မဖြစ်နဲ့ လူလည်းမဖြစ်ပါနဲ့ကွာ…
ခွေးလေးဖိုးလုံးဟာ သခင်ဖြစ်သူကို နောက်တစ်ကြိမ် သတ္တဝါဆိုးတွေက အန္တရာယ်ပြုမှာကို စိုးရိမ်ပြီး သူ့နေရာမှာ သူမအိပ်တော့ဘဲ သူ့သခင်ရဲ့အခန်းရှေ့တည့်တည့်မှာ ပဲ ကင်းစောင့်ပေးနေတော့တာပါ… အရမ်းကို သခင်အပေါ်သစ္စာရှိ ကာကွယ်ပေးတတ်တဲ့ ဖိုးလုံးနော်…. ခွေးချစ်တတ်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးတို့မှာလည်း သစ္စာရှိတဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ခွေးလေးတွေရှိရင် ကွန်းမန့်မှာ ခွေးပုံလေးတွေ မျှဝေပေးခဲ့နော်…
Source : Kyaw Zawe Win
ခှေးဆိုတာ အငျမတနျသစ်စာရှိသော သတ်တဝါပါ….. လူတှနေဲ့ အနီးကပျဆုံးသော သတ်တဝါဖွဈပွီး လူ့အရိပျအကဲကို နားလညျပွီး သငျပေးရငျ တတျကြှမျးလှယျတဲ့ သတ်တဝါထဲမှာ ခှေးလညျးပါဝငျပါတယျ…သခငျအပျေါကိုလညျး အသကျပေးကာကှယျစောငျ့ရှောကျတတျကွသလို သခငျ့ကိုလညျး အငျမတနျသစ်စာရှိကွသူတှေ ဖွဈပါတယျ…. ခှေးကနေ သခငျကို ကယျလိုကျတာ…သခငျသဆေုံးသှားတာမသိဘဲ သခငျ့ပွနျအလာကိုစောငျ့နတော..စသဖွငျ့ အကွောငျးအရာမြိုးစုံဟာ ပွငျပကမ်ဘာမှာ တကယျရှိသလို အဲဒီဖွဈရပျမှနျအဖွဈအပကျြတှကေိုလညျး ရုပျရှငျဇာတျကားတှနေဲ့ ရိုကျကူးဖျောပွရငျး ခှေးတှရေဲ့ သစ်စာရှိပုံကို ဖျောညှနျးထားတဲ့ ရုပျရှငျတှလေညျး မနညျးပါဘူး..
ဒီအထဲမှာဆို သဆေုံးသှားတဲ့သခငျရဲ့ အိမျအပွနျကို စောငျ့နရှောတဲ့ Hachiko ဆိုတဲ့ ခှေးလေးအကွောငျးကို ရိုကျထားတဲ့ ဖွဈရပျမှနျ ဂပြနျရုပျရှငျဇာတျကားဆိုရငျ ကွညျ့ရှုသူအပေါငျးကို မကျြရညျကစြတေဲ့အထိ ဖွဈစခေဲ့တာပါ… ခှေးလေးရဲ့ သစ်စာရှိမှုကွောငျ့ အဲဒီခှေးလေးသသှေားတော့ သူ့သခငျကို အမွဲလာစောငျ့နတေဲ့ နရောလေးမှာ ရုပျတုထုပွီး ဂုဏျပွုခဲ့ပါတယျ….
အခုဖျောပွမဲ့ အဖွဈအပကျြကတော့ နိုငျငံခွားမှာ မဟုတျဘဲ ကြှနျတျောတို့ မွနျမာနိုငျငံမှာ ဖွဈပကျြခဲ့တဲ့ ခှေးလေးတဈကောငျကနေ လူသားတဈဦးရဲ့ အသကျကို ကယျတငျလိုကျတဲ့ ဖွဈရပျပဲ ဖွဈပါတယျ…ဒီဖွဈရပျမှနျအကွောငျးအရာလေးကို ကို Kyaw Zawe Win ရဲ့ Facebook အကောငျ့ကနေ မြှဝထေားတာဖွဈပွီး မွှဟေောကျတဈကောငျရဲ့ အန်တရာယျကနေ ကယျတငျခဲ့တဲ့ အဖွဈအပကျြအလေးကို ခုလိုပဲ ပွောပွထားတာ ဖွဈပါတယျ….
ကြှနျတျောရယျ ဖိုးလုံးရယျ မွှဟေောကျရယျ
ဒီည မှတျမှတျရရ ..ည ၁၁ နာရီလောကျဖိုးလုံး ကြှနျတေျာ့အခနျးအပေါကျဝကနေ စူးစူးဝါးဝါး ဟောငျနတေယျ။ စိတျထဲတော့ တခုခုပဲ လို့ထငျလို့ အခနျးအပွငျဘကျထှကျပီး ခွံထဲကိုလှမျးကွညျ့နတော ကြိနျးသတေယျ ခွံအပွငျမှာ လူစိမျးရှိရမယျ။ ဖိုးလုံးဟောငျတာ လုံးဝမရပျသှားဘူး အပွငျဘကျလညျး မထှကျဘူး ..
သံမံတလငျးကွညျ့ဟောငျနတော စိတျထဲ မသင်ျကာလို့ အောကျ ငုံ့ကွညျ့တော့ ဖိုးလုံး ဟောငျလို့ ဟိုကောငျပွေးတာ ခွထေောကျကွားထဲဖွတျအပွေး.. ဖိုးလုံးက အတငျးထိုးလိုကျနဲ့..ဟိုကောငျဖိုးလုံးကိုကွောကျပီး ကို့မမွငျတာ ကံကောငျးသှားတယျ..
အခုတော့ ဖိုးလုံးလညျး သူ့နရော သူသှားမအိပျပဲ အခနျးရှေ့ တခါးပေါကျတညျ့တညျ့ကနေ ဘယျ့မှ မသှားတော့ဘူး။ သူ့ အိပျရာ သှားအိပျခိုငျးလညျးမရတော့ဘူး ကြှနျတော့အခနျးရှအေ့ပေါကျဝကနေ တဖဝါးမှ မခှာတော့ဘူး..ဖိုးလုံး ကွညျ့ပီး မကျြရညျတောငျ ဝဲမိတယျ။ ကြှနျတျောအပွငျက ပွနျလာရငျ သူ့ကို ဝယျကြှေးရငျ ၅၀၀ ရာတနျ ပေါငျမုနျ့လောကျပဲ ကြှေးတာပါ။ သူသိတတျတာကတော့..
ဖိုးလုံးရေ နောငျဘဝတော့ ရှိရငျ ခှေးလညျး မဖွဈနဲ့ လူလညျးမဖွဈပါနဲ့ကှာ…
ခှေးလေးဖိုးလုံးဟာ သခငျဖွဈသူကို နောကျတဈကွိမျ သတ်တဝါဆိုးတှကေ အန်တရာယျပွုမှာကို စိုးရိမျပွီး သူ့နရောမှာ သူမအိပျတော့ဘဲ သူ့သခငျရဲ့အခနျးရှတေ့ညျ့တညျ့မှာ ပဲ ကငျးစောငျ့ပေးနတေော့တာပါ… အရမျးကို သခငျအပျေါသစ်စာရှိ ကာကှယျပေးတတျတဲ့ ဖိုးလုံးနျော…. ခှေးခဈြတတျတဲ့ ပရိသတျကွီးတို့မှာလညျး သစ်စာရှိတဲ့ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ ခှေးလေးတှရှေိရငျ ကှနျးမနျ့မှာ ခှေးပုံလေးတှေ မြှဝပေေးခဲ့နျော…
မြမြဇာတ်ကားမှာ သင်ဇာနဲ့အတူသရုပ်ဆောင်မယ့် မုဒိမ်းကျင့်သူ ၃ ယောက်ကို ရွေးချယ်လိုက်ပါပြီ
ကိုးရီးယားမှာ မြန်မာသီချင်း ကို ဂုဏ်ယူစွာ သီဆိုခွင့်ရတော့မယ့် သမီးလေး နော်မာသထူးဝါး
လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားက ဆယ်လီဇနီးမောင်နှံ...